Nhau - Ndeapi maviri akajairika technical parameter eLCD anoratidza?
Ndeapi maviri akajairika technical ma parameter eLCD anoratidza?
Iyo control IC inoshandiswa mukugadzira kweLCD skrini - Zvishongedzo senge mafirita uye mafirimu ekutungamira, Inoenderana nekusiyana kwepaneru, Yevashandisi vese, Chikamu chakasiyana che350: 1 chakwana, Zvisinei, musiyano wakadai muhunyanzvi munda haugone kusangana nezvinodiwa nevashandisi. Inofananidzwa neCRT monitors inosvika nyore 500: 1 kana yakatokwana musiyano reshiyo, Chete yepamusoro-kumagumo maLCD monitors anogona kuzadzikisa danho iri. Iwo maLCD monitors ekutanga-tier mhando senge Samsung, Asus, LG, nezvimwe pamusika zvinogona kusvika padanho re1000: 1 mutsauko weyero. Asi nekuti musiyano wacho unonetsa kuyera nenzira kwayo nechiridzwa, Saka kana ukasarudza, uchatofanira kuzviona wega.
Musiyano wakakosha kwazvo, Zvinogona kutaurwa kuti kusarudzwa kwechiratidzo chekristaro yemvura kwakanyanya kukosha kupfuura nzvimbo inopenya, Paunodzidza kuti vatengi vako vanotenga maLCD ekuvaraidza nekutarisa mafirimu, Unogona kusimbisa kuti mutsauko wakakosha kupfuura kwete mapikisheni akafa, Patinenge tichiona kutenderera, Kazhinji, kupenya kweiyo firimu sosi haina kukura, Asi kuti uone kupesana kwechiedza nerima munzvimbo yehunhu, Bvudzi dhizaini rinoshanduka kubva grey kuenda kune nhema, Zvinoenderana nedanho rekusiyanisa. Mune iyo 256-chikamu grey chiyero bvunzo mune bvunzo software, mamwe madiki grey grid anogona kuoneka zvakajeka kana uchitarisa mudenga, ndiko kuti, mutsauko wakanaka!
LCD liquid kristal screen chinhu chiri pakati pe solid uye emvura.Haikwanise kuburitsa mwenje pachawo, Imwe yekuwedzera mwenje sosi inodiwa. Nekudaro, Iyo nhamba yemarambi inoenderana nekupenya kweLCD. Iwo ekutanga emvura kristaro anoratidzira aive nemarambi maviri epamusoro uye ezasi chete, Akadzika kwazvo erudzi rwakakurumbira mwenje mina. Iyo yepamusoro-kumagumo mwenje mitanhatu. Dhizaini-marambi dhizaini yakakamurwa kuita matatu marudzi ekuisa: Imwe ipombi pane yega yega yemativi mana, Asi chakanakira ndechekuti pachave nerima mimvuri pakati, Mhinduro ndeyekuronga ina machubhu machubhu yakatwasuka kubva kumusoro kusvika pasi. Yekupedzisira ndiyo "U" -yakaratidzirwa kuratidzwa, Muchokwadi, iwo maviri machubhu anogadzirwa nemarambi maviri akahwanda. Dhizaini yemarambi matanhatu inonyatsoshandisa mwenje mitatu, Iyo inogadzira yakakotamisa ese matatu mwenje machubhu kuita "U" chimiro, ndokuzoisa mukati Kuti ikwanise kushanda kwematanhatu machubhu.
Kupenya zvakare chiratidzo chakakosha, Iyo yakajeka iyo LCD inoratidza vanhu vari kure, Mira kunze kubva pamutsara weLCD masvingo, Iyo yekumusoro tekinoroji yatinowanzoona muCRTs ndeyekuwedzera izvozvi zvemumvuri mask tube .Bombard iyo phosphor, Inogadzira. yakajeka mhedzisiro, Tekinoroji yakadai, Kazhinji zvichikanganisa mhando yemufananidzo, Mukutsinhana nehupenyu hwechitarisiko, Zvese zvigadzirwa zvinotora mhando iyi yehunyanzvi zvakajairika kupenya nekutadza, Gara uchidhinda bhatani kuti uite, Dzvanya 3X kuti utambe mutambo ; Dhinda zvakare kuti uchinje kuve 5X kupenya kuti utarise DVD, Kana ini ndikatarisa zvakanyanya, inova isina kujeka. Kuti uone iwo mavara, iwe unofanirwa kudzokera kune yakajairwa mameseji modhi. Iyi dhizaini inonyatso kudzivirira munhu wese kushandisa kujekesa. Nheyo yeLCD inoratidza kupenya yakasiyana neCRT. Izvo zvinoitwa nekupenya kweye backlight chubhu kuseri kwepaneru. Saka pane akawanda marambi dhizaini, Iyo mwenje ichave yakafanana. Asi ese akajeka mapaneru anozove nekukuvara kunouraya, Iyo skrini ichadonhedza mwenje, Chiedza leakage inoreva pasi peiyo nhema nhema skrini, Iyo LCD haina kusviba, Iyo chena uye grey. Naizvozvo, yakanaka LCD haifanire kusimbisa kupenya, Panzvimbo iyoyo, simbisa musiyano zvakanyanya.